အမှား ၁၉ ခုကယောက်ျားတွေအားလုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲမိတဲ့အခါအပြစ်ရှိတယ် - သတင်း
အမှား ၁၉ ခုကယောက်ျားတွေအားလုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲမိတဲ့အခါအပြစ်ရှိတယ်
အဆင်မပြေတာကိုမင်းသိလား အချို့လူများက - ဒါပေမယ့် - နေဆဲအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုစနစ်တကျလက်ချောင်းကိုဘယ်လိုမသိရပါဘူး။
PSA လူများ - ငါတို့ရှိသမျှသည်သီးသန့်အပြာအပြာ WKD နှင့် Strongbow ၂ လီတာပုလင်းများသောက်သုံးသည့်အိမ်ပါတီ၏ရေချိုးခန်းတွင် ၁၅ နှစ်မပြည့်သေးပါ။ အဲ့ဒီတုန်းကလက်ညှိုးထိုးတာကိုနားလည်နိုင်ပေမဲ့ porn ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကောင်မလေးဘယ်လိုလက်ချောင်း လမ်းညွှန်ဆောင်းပါးများနှင့်အလေ့အကျင့်။
သင်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုစနစ်တကျလက်ချောင်းဖြင့်မည်သို့သိနိုင်မည်ကိုမသိသောကြောင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး လာရန်ကြိုးစားနေသူများအနေဖြင့် - စိတ်မပူပါနဲ့၊ အောက်ပါအမှားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုများစွာကိုသင်လုပ်မိနေနိုင်သည်။
အချို့မိန်းကလေးများသည်၎င်းတို့လာရောက်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသည်အနှစ် ၂၀ ထောင်ဒဏ်ကျခံထိုက်သောရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
နှစ်။ ရှည်လျားသော, ရှားပါးလက်ချောင်းများ
သငျသညျသူမ၏လည်ချောင်းနာရှည်လျားလက်ချောင်းလက်သည်းနှင့်အတူသူမ၏အတွင်းကုပ်ခြစ်နေလျှင်သူမကျိန်းသေလာမယ့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဘယ်လိင်မှုကိစ္စကိုမဆိုဖြတ်တောက်ပစ်ရန်သတိရပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Urrr တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ။ ငါ့ကိုလက်ညှိုးထိုးဖို့မေ့နေတာလား။
သင်ခန်းစာတစ်ခု - ဒီဟာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတွေပေါ်မှာတွေ့ရတယ်၊ အကယ်၍ မင်းကဒီမှာဒီနေရာကိုသွားပြီးလက်သီးတစ်လုံးလုံးကိုထည့်သွင်းနိုင်မယ်လို့တကယ်ထင်ခဲ့ရင်၊ နေရောင်ခြည်ကမှားတယ်လို့ငါထင်တယ်။ သင်၏ porn သို့ပြန်သွားပါ။
၆။ သူမလုံလောက်မှုမရှိလျှင် LUBING မပေးပါ
သူမစိုစွတ်နေရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူမအတွက် ဦး နှောက်အာရုံကြော, ဒါမှမဟုတ်မရ ခံစားချက် အခုစိတ်ဓါတ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်နမ်းအလျင်အမြန်ရှိအလုံအလောက်ထိရှိခဲ့သည်မဟုတ်ခဲ့, ဒါမှမဟုတ်သူမပဲပါတီသွားရတဲ့အချို့အကူအညီလိုအပ်နေသည်။
lube ကိုသုံးပါ !!! သူမလုံလောက်အောင်စိုစွတ်နေခြင်းမရှိပါကသင်၏ကန္တာရထဲသို့သင်၏လက်ချောင်းများကိုအတင်းအကျပ်မစတင်ပါနှင့်။ ဒါဟာမသက်မသာရဲ့, သူမသူမ၏ခြေထောက်ပိတျထားနှင့်သင်အစဉ်အဆက်ကိုထပ်ဝင်ခွင့်ဘယ်တော့မှစေခညျြနှောငျ။ Lube ကအရာအားလုံးကိုပိုပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပေးသည်။ ပြီးတော့သူမရဲ့ clit အပေါ်တွင်လည်းကောင်းသည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည် ၁၀ မိနစ်ကျော်ကြာလျှင်သင်ရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏လျှာနှင့်အတူဆင်းသွားပါ, သို့မဟုတ်သူမလိင်အဘို့အဆင်သင့်ရှိမရှိကြည့်ပါ, ဒါမှမဟုတ်ပဲညဉ့်ကိုခေါ်ပါ။
၁၀။ G-spot ကိုရှာဖွေရန်အထူးကြိုးစားပါ
ဒါဟာရုံအဆင်မပြေပါပဲနှင့်သင်နှင့်အတူပေါ်ရတဲ့နိုင်အခြားအရာလည်းမရှိ tbh ။
တစ်မိနစ်အတွင်းအနိုင်ဆုံးအကြိမ်တိုင်းသည့် buzzer ကိုမည်သူမဆို၏ဆူညံသည့်ဂိမ်းကဲ့သို့သင်၏မိန်းကလေး၏လိင်အင်္ဂါကိုမဆက်ဆံပါနှင့်။ လက်ချောင်းများအတွက်အရှိန်အဟုန်၊ အတွေးနှင့်စည်းချက်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့အားလုံး 100mph ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သူမကိုတုန့်ပြန်ပါ။ သူမကိုတဖြည်းဖြည်းလက်ညှိုးထိုးပြီးသင့်လက်ချောင်းတွေကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်ရင်သူကြိုက်ပါသလား။ အနည်းငယ်ရောနှောပါ - စပ်ထားပါ။
13. FINGERING, KISS သို့မဟုတ် TOUCHING လိုမျိုး MULTI-TASKING t
စစ်မှန်သောအကောင်းအဆိုးများသည်ပြmultiနာပေါင်းစုံဖြင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ သင်နမ်းနေစဉ်လက်ချောင်းကိုလိုချင်နေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ် သူမ၏ Boob ထိ သို့မဟုတ်သူမ၏နို့သီးခေါငျးကိုနို့စို့သို့မဟုတ်လိမ်။ သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းနှင့်သူမရဲ့ clit နှင့်ယောနိတို့နှင့်အတူ hallelujah ကိုသီဆိုရန်သင်ပြုလုပ်လိုသည်။ မင်္ဂလာပါ! မင်္ဂလာပါ!
ဒီတော့ပုံသင်ကသင်၏လက်ချောင်းနှင့်အတူ '' ဒီနေရာကိုလာ '' ရွေ့လျားမှုလုပ်ဖို့လိုအပ် G-spot ကိုထိမှန်ရန်။ G-spot သည်လိင်အင်္ဂါ၏နံရံပေါ်တွင်ရှိသည်။
သို့သော် G-spot ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ မိန်းကလေးအားလုံးသည်ထိုးဖောက်ခြင်းမှလာသည်ကိုမမှတ်မိပါနှင့်။ သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုရောနှောခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်တေးဂီတတူရိယာကဲ့သို့သူမခံစားရသမျှများစွာကိုမပြုလုပ်ပါ။
သူမအိုင်တီ၌မွေ့လျော်သောအခါ 15. လမ်းညွှန်မယူ
အကယ်၍ သူသည်ဆူညံသံများမပြုလုပ်ရန်၊ သင့်ကိုမြန်မြန်သွားရန်ပြောရန်၊ သို့မဟုတ်သင်လုပ်နေသည့်အရာသည်ကောင်းလျှင်၊ သူမမပျော်ပါ။ အကယ်၍ သူမသည်သင့်ကိုကူညီပေးသည်ဆိုလျှင်စိတ်မဆိုးပါနှင့်၊ သင့်အတ္တကိုအနာတရဖြစ်အောင်မခံစားမိပါနှင့် - မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုလက်ညှိုးထိုးခြင်းသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၆။ CLIT အပေါ်လုံလောက်သောဖိအားကိုမသုံးပါနှင့်။
အဆိုပါ Clitoris 8000 အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်ရှိပါတယ် ။ ၎င်းသည်အလွန်အထိခိုက်မခံသောကြောင့်ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်သင့်သည်။ သငျသညျအလွန်အကျွံစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကကိုင်တွယ်နေလျှင်မူကား, သူမခံစားရလိမ့်မယ်။ သငျသညျလွန်းအင်အားသုံးပါကအပေါ်တွန်းလျှင်ပညာရှိကဲ့သို့ပင်ကြောင့်ဖြစ်စေထိခိုက်စေသို့မဟုတ်မသက်မသာဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်မှန်ကန်သောဖိအားကိုမရနိုင်ပါကသူမကိုသင့်အားကူညီပေးပါ။
၁၇။ ၀ တ်စုံဆင်ယင်သည့်အခါ CLIT နှင့်ဆော့ကစားခြင်း
၁၈။ ကြိုတင်လက်ညှိုးထိုးခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမပြုမီထိတွေ့မှုကိုမလွယ်ကူသည့်အခါ t
ဘာမှမဖြစ်နိုင်မီမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုလှဲချခြင်းသည်နွေးထွေးသောလုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမနှိုးဆွခြင်းနှင့်တင်းမာနေရတဲ့ရဲ့မဟုတ်လျှင်, သင်၌လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းသို့မဟုတ် mannt တစ် turntable တူသောသူမ၏ clit ပွတ်သပ်စတင်ရန်အဘို့အသူမအဆင်သင့်ဖြစ်မသွားပါလိမ့်မယ်။
နမ်းဖို့အချိန်ပေးပါ သူမ၏ Boob မထိပါ , အဲဒီမှာသင်၏လမ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူမ၏လည်ပင်းကိုထိပါ၊ သူမ၏ဘောင်းဘီ၏အပြင်ဘက်ကိုသန့်ရှင်းသပ်ရပ်။ သင်၏လက်ကိုပေါင်ပေါ်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ပါ။ သငျသညျအခမ်းအနားများ box ထဲကနောက်ဆုံး Malteaser ဖမ်းပြီးနေကဲ့သို့သူမ၏လိင်အင်္ဂါထဲမှာ pounce ဘယ်တော့မှမ။
၁၉။ အချို့သောမိန်းကလေးများသည် CLIT လှုပ်ရှားမှုအတွက်သာလိုချင်ကြသောကြောင့်သင့်လက်ချောင်းများနှင့်အတူမသွားပါနှင့်။
သူမနှစ်သက်သောအရာကိုနားထောင်ပါ။ အကယ်၍ သူမသည်လက်ချောင်းများကိုမတုန့်ပြန်လျှင်၊